Umaka: Twitter | Martech Zone
Izizathu Ezenza Abantu Bayeke Ukulandela Amabhrendi Ku-Twitter
ULwesibili, May 24, 2022 NgoLwesihlanu, ngoJuni 24, i-2022 Douglas Karr
Lokhu kungaba enye ye-infographics emnandi kunazo zonke leyo Highbridge okwenzile kuze kube manje. Senza inqwaba ye-infographics kumakhasimende ethu, kodwa lapho ngifunda indatshana ku-eConsultancy yokuthi kungani abantu bengalandeli ku-Twitter, ngacabanga ngokushesha ukuthi kungenza i-infographic ejabulisa kakhulu. Umklami wethu we-infographic ulethe ngaphezu kwamaphupho ethu angalawuleki. Ingabe unomsindo kakhulu ku-Twitter? Ingabe ucindezela ukuthengisa okuningi? Ingabe ugaxekile ngokungenamahloni? Noma kunjalo
I-Repuso: Qoqa, Phatha, Futhi Ushicilele Ukubuyekezwa Kwekhasimende Lakho & Nobufakazi Bewijethi
ULwesihlanu, May 20, 2022 ULwesihlanu, May 20, 2022 Douglas Karr
Sisiza amabhizinisi endawo ambalwa, okuhlanganisa uchungechunge lwezindawo eziningi zokulutheka nokululama, iketango likadokotela wamazinyo, kanye namabhizinisi ambalwa wamasevisi asekhaya. Ngesikhathi sigibela kulawa makhasimende, ngamangala ngokweqiniso, ngenani lezinkampani zasendaweni ezingenazo izindlela zokucela, ukuqoqa, ukuphatha, ukuphendula, nokushicilela ubufakazi bamakhasimende abo nezibuyekezo. Ngizokusho lokhu ngokungananazi… uma abantu bethola ibhizinisi lakho (abathengi noma i-B2B) ngokusekelwe endaweni okuyo,
NgoLwesine, Februwari 17, 2022 NgoLwesine, Februwari 17, 2022 Ann Smarty
Inkundla yezokuxhumana iyindlela enhle yokukhiqiza ithrafikhi nokuqwashisa ngomkhiqizo kodwa kungase kube inselele ekukhiqizeni imikhondo ye-B2B. Kungani inkundla yezokuxhumana ingasebenzi kahle njengefaneli yokuthengisa ye-B2B nokuthi ungayinqoba kanjani leyo nselele? Ake sizame ukukuqonda! Izinselelo Zesizukulwane Esiholayo Kwezokuxhumana Kunezizathu ezimbili ezibalulekile ezenza izinkundla zokuxhumana kube nzima ukuphenduka zibe iziteshi ezikhiqiza umthofu: Ukumaketha kwezokuxhumana kuyaphazamisa - Cha.
Shoutcart: Indlela Elula Yokuthenga Ukumemeza Kwabathonya Bezokuxhumana
Lwesibili, Disemba 28, 2021 Lwesibili, Disemba 28, 2021 Douglas Karr
Iziteshi zedijithali ziyaqhubeka nokukhula ngesivinini esikhulu, okuyinselelo kubakhangisi yonke indawo njengoba benquma ukuthi yini abangayiphromotha nokuthi bayikhangise kuphi imikhiqizo namasevisi abo ku-inthanethi. Njengoba ubheke ukufinyelela izethameli ezintsha, kukhona iziteshi zedijithali ezivamile ezifana nokushicilelwe komkhakha nemiphumela yosesho... kodwa futhi bakhona abathonyayo. Ukukhangisa kwe-Influencer kuyaqhubeka nokukhula ekudumeni ngoba abagqugquzeli bakhule ngokucophelela futhi bakhetha izethameli zabo nabalandeli ngokuhamba kwesikhathi. Izithameli zabo zikwenzile